Ịchụ Your Travel | Save A Train
Home > Travel Europe > Ịchụ Your Travel
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 24/04/2020)
Onye ọ bụla na-emeso-ejegharị ejegharị dị iche iche. Ụfọdụ na-enweta ahụmahụ na-abịa site na-eme njem mgbe na nsọtụ ọzọ ụfọdụ dị nnọọ njem ruru ka nrụgide ndị ọgbọ ma ọ bụ ezinụlọ mgbali. Ihe ọ bụla kpatara ya mgbe ọ na-abịa ejegharị ejegharị, ọzọ e nwere ụzọ dị iche iche otú ndị mmadụ na-amasị ka atụmatụ ya. Otú ọ dị, irrespective nke onye ahụ si preferences, e nwere ihe ụfọdụ dị mkpa ka na-adịghị otú ị na-adịghị na-eche ihu hassles mesịrị, dị ka AKWỤKWỌ m ụgbọ okporo ígwè tiketi ma ọ bụ ụgbọelu na tiketi n'ihi na okwu.
Ejegharị ejegharị n'ihi na ụfọdụ ndị dị ka m a igba na ha mkpa ná ndụ na ụzọ ha si na n'ebe nchekasị nke ụbọchị ndụ. Otú ọ dị, e nwere ihe ụfọdụ na-amasị m mere ka akwụkwọ m ụgbọ okporo ígwè tiketi ma ọ bụ ụgbọelu na tiketi tupu nke mere na m nwere ike inwe ụfọdụ ndibiat online maka atụmatụ mma. site Ntinye akwụkwọ m ụgbọ okporo ígwè tiketi online ma ọ bụ tupu n'ihi na nke ahụ ga-hụ na m na-adịghị na ihu ikpeazụ oge mmechuihu nke na-abụghị ọdịdị nke tiketi ma ọ bụ ohere. Ụfọdụ ndị ga-achọ nnọọ ebu akpa ha na takeoff. Nke a kwere omume naanị dabere na ebe na ị na-ejegharị ejegharị na-.
Nga atụmatụ chọrọ ma ọ bụ?
Ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị n'ime obodo, na dị nnọọ na-a ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ a ụgbọ ala ntinye akwụkwọ ga idozi mbipụta. The ọzọ nhọrọ bụ ejegharị ejegharị na-mba ebe e nweghị visa chọrọ i.e., ha ihe a na-akpọ visa-on-mbata. A mba, ị nwere ike dị nnọọ akwụkwọ na banye a ụgbọ elu na ndị ọzọ niile na iji mezuo iwu na-e-elekọta mgbe i ebe. Ya mere na njem ma ọ bụ njem dị ka ndị a, E nwere bụghị ọtụtụ atụmatụ chọrọ. Otú ọ dị, mgbe e nwere iji mezuo iwu ka visa na niile ka a na-elekọta nke. The njem atụmatụ mkpa ka e mee tupu. A ga-enwe a ntinye akwụkwọ nke gbaa ụgbọ okporo ígwè, nke ga-mkpa ka a mere nke ọma tupu ka biputere ntinye akwụkwọ gị visa nwere ike zitere maka nhazi. Naanị otu ugboro na visa mma, na ị na-niile ka njem. E nwere ike ma ọ bụ nwere ike ịbụ na a mkpa maka inwekwu atụmatụ dabere onye ị na-ejegharị ejegharị na na otú ị na-amasị ka atụmatụ njem gị.
Berlin na Munich Train tiketi
Frankfurt na Munich site Train
Ejegharị - An njem
ejegharị na-enye gị ohere ịhụ ọhụrụ ebe na ịchọpụta ọdịbendị ọhụrụ. Ọ na-emepe uche ọzọ na-enye gị ohere na-eche n'èzí igbe. Otú ọ dị, e nwere mgbe niile na iji mezuo iwu na-agaghị emeli na-abịa na-ejegharị ejegharị. Ọtụtụ n'ime oge ọ na-n'ịhụ na gị visa na ndị ọzọ njem akwụkwọ na-na ebe nke mere na ị na-adịghị na-ata ọ bụla mmechuihu mgbe ị na-amalite njem ma ọ bụ n'oge njem n'ihi na okwu. Obi ụtọ na-ejegharị ejegharị!
Brussels na tiketi maka Lyon Train
Geneva na tiketi maka Lyon Train
Mgbe ị na-eme na-eme atụmatụ njem gị, nke kacha mma website ka Order ụgbọ oloko tiketi bụ Save A Train
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na nnọọ inye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/planning-your-travel/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / tr aka / fr ma ọ bụ / ya na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.